Madaxweyne Ekrem Yüce, oo booqday Warshadda Hyundai Eurotem Factory, ayaa yiri, “Waxaan si aad ah uga shaqeyneynaa sidii aan magaaladeena isugu keeni lahayn nidaamyada tareenka. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa wadahadalada lagama maarmaanka ah oo aan la tashano magacyo khabiiro ah. Sidaa darteed, Eurotem's [More ...]
Laga bilaabo Oktoobar 7, tilmaamaha Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, ardayda waxay muujinayaan xiisaha weyn ee basaska keli ah ee bixiya adeeg bilaash ah inta udhaxeysa Xarunta Jaamacada Hacettepe Beytepe Station iyo Hacettepe Beytepe Campus. Dawlada Hoose ee Magaalada EGO [More ...]
In kasta oo khidmadda xad dhaafka ah ee ay sameysay TCDD illaa Xawaaraha Xawaaraha Sare (YHT) khidmadaha diiwaangelinta ayaa wali ku jira ajandaha, waxaa sidoo kale la shaaciyay in dhimista boqolkiiba 1.5 ee lagu dabaqay tigidhada laga soo iibsado internetka laga saaray. SözcüSida uu sheegayo warbixinta Cali Ekber Ertürk oo ka socota: [More ...]
Agaasinka Dhallin-yarada iyo Cayaaraha ee G providesmüşhane wuxuu siiyaa tababar baraf ah in kabadan 100 arday oo ku sugan Xarunta Zigana Ski Center oo leh tababarayaal sanad dugsiyeedka 2019-2020. Gaadiidka, Cuntada iyo waxbarashada ayaa soo dhoweeyay degmada Gümüşhane ee Torul [More ...]